ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि सुवास नेम्वाङलाई अघि सारेपछि प्रचण्ड , नेपाल तनाबमा – iNews16
ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि सुवास नेम्वाङलाई अघि सारेपछि प्रचण्ड , नेपाल तनाबमा
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिरुद्ध पार्टीभित्रै घेराबन्दी सुरु भएपछि नेकपा फुटको संघारमा पुगेको छ। नेताहरु प्रचण्ड, माधब नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेब गौतम प्रधानमन्त्री ओलीलाई जारी स्थायी समिति बैठकमा पार्टी र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा मागिरहेका छन्।
यतिबेला दुबैपक्षले गुटगत भेलाहरुलाई तिब्रता दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली राजीनामा दिने पक्षमा छैनन्। बरु ओलीले आफुलाई भारतीय पक्षको आग्रहमा प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन चाल थालेको प्रचण्ड–नेपाललाई आरोप लगाइरहेका छन्। ओलीको राजीनामापछि प्रचण्ड या नेपाल प्रधानमन्त्रीका लागि उभिने छन्। तर, ओलीले आफु हट्नु परे प्रधानमन्त्रीका लागि नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको नाम अघि सारेपछि प्रचण्ड–नेपाल तनाबमा देखिएका छन्।
दाङ । दाङ तुलसीपुरकी एक युवतीले बुधबार मध्यराति फेसबुकमा लाइभ भिडियो दखाउदै ज्यान फालेकी छन् । ज्यान फाल्नेमा गर्नेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ रानीजरुवाकी २३ वर्षीया एलिसा गौतम रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
घ’टनाको खबर पाएसँगै प्रहरी गौतमको घर पुगेको थियो । तर, प्रहरी पुग्नु भन्दा अघि नै उनको नि’धन भइसकेको प्रहरीले जनायो । गौतमका घरका ससदस्य भने सबै भारत गएका छन् । मृ’तकको श’व पो’स्टमार्टमका लागि राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको छ । पो’स्टमार्टम र घ’टनाको छानबिनपछि मृत्युको कारण खुलने प्रहरीले बताएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय तुल्सीपुरका प्रहरी प्रमुख डिएसपी शिवबहादुर सिंहले ती युवतीले घ’टना भएको पुष्टि गरे ।
युवतीले किन यसो गरिन् भन्ने खुलेको छैन । मृतक युवतीको श’व पो’ष्टमार्टमका लागि राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुल्सीपुरमा राखिएको छ । घट’नाको थप अ’नुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनले यस्तो गर्नु पुर्व एउटा गित बजाएकी थिइन् । सम्झना बिर्सना यो सिउँदो जोगाउनु, मेरो ला’सको मलामी तिमि हुनु भन्दै उनले संसारबाट बिदा लिएकी हुन् । घ’टनाको खबर पाएसँगै प्रहरी गौतमको घर पुगेको थियो । तर, प्रहरी पुग्नु भन्दा अघि नै उनको नि’धन भइसकेको प्रहरीले जनायो । गौतमका घरका ससदस्य भने सबै भारत गएका छन् ।
Previous ओलीलाई अब ६ महिना कसले हल्लाउने !
Next ओलीले भने -म भन्दा उत्कृष्ट नेता आऊन्, अहिल्यै छाडिदिन्छु !
By user user 14 hours ago